မဒမ်ကိုး: ပန်းဖူးပန်းငုံ စုံစုံလင်လင်ဤရဂုံတွင်
မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့ရဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက်ခြေလှမ်းကို စတင်လိုက်ပြီးနောက် ရုပ်လုံးစဖော်ရာမှာ သာယာကုန်းဘုန်းတော်ကြီး ပညာရေးကျောင်းအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ထမင်းစားဆောင်ကို စတင်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် အုတ်မြစ်ချပန္နက်ရိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် ။ အလှုရှင်များရဲ့ ကောင်းမှုနဲ့ စတင်ရုပ်လုံးဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဒီအဆောက်အဦးအုတ်မြစ်ချမင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ၂၉ ရက် သြဂတ်စ်လ ၂၀၁၂နေ့မှာ သာယာကုန်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း သန်လျင်မြို့မှာ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်နှင့်အတူ ပန္နက်ချပွဲမင်္ဂလာကိုအကျဉ်းရုံးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
အလှုရှင်များ ကုသိုလ်ပွားများ နိုင်စေရန်အလို့ငှာ ပန္နက်ရိုက်မင်္ဂလာအခမ်းအနားမှပုံများနှင့်တကွ ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပါ ပူးတွဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ပန်းကလေးများပွင့်တော့မည်ဖူးတံဝင့်လိုချီ နေချည်မှာရွှေရည်လောင်း ငါတို့စာသင်ကျောင်း
Labels: အလှုကိစ္စ, အလှုဓါတ်ပုံများ
လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲကို ခံစားရတယ်.... ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
သာဓု ၃ကြိမ်ခေါ်ဆိုပြီး ကြည်နူးပီတိ ယူသွားပါတယ်
အညွှန့် အတက် ကလေးတွေပေါ့ဗျာ
သာဓု . သာဓု . သာဓု ပါ